सरकार–विप्लव अनौपचारिक संवादमा - Nepal Japan
नेपाली समय : 04:50:51
जापानी समय : 08:05:51
सरकार–विप्लव अनौपचारिक संवादमा
22 May, 2019 12:10 |पत्रपत्रिका | comments | 17700 Views
वार्ताटोली सदस्य भन्छन्– प्रधानमन्त्रीज्यू पनि वार्ताबाटै समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले अनौपचारिक संवाद अघि बढाएको छ । यसअघि विभिन्न राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न गठित सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समितिले नै चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।
‘सरकारले सुरुमा धरपकड र पक्राउ गरेर दमन गर्ने नीति लिएको थियो, त्यो चरण पूरा भयो,’ तत्कालीन वार्ता टोलीका सदस्यले भने, ‘अब संवाद गर्ने भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पनि विप्लवप्रति नरम नीति लिएको र आक्रामक अभिव्यक्ति दिन छाडेको ती सदस्यले बताए ।
वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सचिवालयका टिम र तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेसमेतको टोली खटिएको छ । उनीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका दोस्रो तहका नेतालाई भेटेर वार्ताको वातावरण बनाउन थालेका छन् ।
सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाका पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका नेताहरू पनि वार्ताकै पक्षमा देखिएका छन् ।‘महासचिवज्यू वार्ता गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न,’ प्रतिबन्धित नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले एजेन्डासहित शीर्ष तहबाट वार्ता टोली बनाए बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।’
पार्टीनिकट अनलाइन इ–रातो खबरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै विप्लवले आफूहरूले परिणाममुखी वार्ता चाहेको बताएका छन् । सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग संवादमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले पनि आफूहरूले सार्थक वार्ता चाहेको नयाँ पत्रिकालाई बताए । गत फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेका थिए ।
गत फागुन १० गते ललितपुरस्थित नख्खुसहित देशैभर १७ स्थानमा राखिएका एनसेल टावर आक्रमण गरेका थिए । एनसेल टावर आक्रमण गर्दा एकजनाको मृत्यु हुनका साथै २ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । गत फागुन १५ गते धरानमा अत्याधुनिक एलएमजी एक थान प्रहरीले बरामद ग-यो ।
गत फागुन २३ गते कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ९ स्थित शिवगढीमा हातहतियारसहित नेता कार्यकर्ता लुकेको आशंकामा प्रहरीले बिहानै छापा मा-यो । यादव चन्दको घरबाट प्रहरीले एसएमजी २ थान, त्यसमा लाग्ने गोली ६८ राउन्ड, त्यसको म्यागजिन ३ थान, ५४ टाइप पेस्तोल १ थान, त्यसको म्यागजिन १ थान, गोली ३ राउन्ड, ५.५६ क्यालिभरको राउन्ड १ सय ३१ पिस, थप म्यागजिन १ थान र विभिन्न किसिमका तार तथा फलामका नटहरू १ बोरा (२५ केजी) बरामद ग-यो  ।
गत फागुन २५ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुङमा घरमा बम विस्फोट गराए । विप्लव पार्टीले एक पछि अर्को घटना गराउनुका साथै हतियार फेला पर्दै गएपछि पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सरकार जहिल्यैवार्ताकै पक्षमा छ
गोकुल बाँस्कोटा, सरकारका प्रवक्ता
हामी जहिल्यै वार्ताकै पक्षमा छौँ । वार्ताबाट हामी होइन उहाँहरू भाग्नुभयो । सरकार वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छ । वार्ताका लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट पहल पनि गर्दै आएको हो । विप्लवजीहरूको माग के–के हुन्छन्, स्पष्ट रूपमा भन्नुप-यो । एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन । पहिला उहाँहरूले हिंसा त्याग्छु भन्ने बारेमा सहमति जनाउनुप-यो । अनि समस्या समाधान वार्ताबाटै गर्न सरकार तयार छ ।
पार्टीले जिम्मा दिए विप्लवसँग वार्ता गर्न तयार छु
जनार्दन शर्मा, स्थायी समिति सदस्य, नेकपा
हामीले समाजवादमा जाने भनेका छौँ । विप्लवजीहरूले पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ । अब हतियारले युद्ध गरेर क्रान्ति गर्न सम्भव छैन । युद्ध गरे पनि कसका विरुद्ध लड्ने ? सत्ताको बागडोर कम्युनिस्ट पार्टीले नै सम्हालेको छ । के कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध लड्ने त ? त्यो पनि भएन । बरु वार्ता संवादबाट के कति माग पूरा गर्न सकिन्छ छलफल गरौँ । मैले विप्लवजीसँग अनौपचारिक संवाद थालेको छु । पार्टीले विप्लवजीहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिए तयार छु ।
विप्लवबारे सरकारी धारणा : प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबीच नै मतभेद